Fomba 10 fetsifetsy, azo ampiasana ny voasarimakirana
Vovon-kafe dorana, mampadositra moka…
Tsy zakan’ny moka ny fofon’ny vovon-kafe dorana. Mialoha ny hanidiana trano dia dory ny vovon-kafe ary avelao hiparitaka manerana ny trano ilay fofona. Voajanahary ity ody moka ity ka tsy misy hatahorana ho an’ny fahasalamana mihitsy mihoatra amin’ireo akora vidiana vita.
Verana solomaso kiaka… andramo ity
Samy manadio ny vinaingitra sy ny “liquide vaisselle” ka manala ny karazana loto sy tasy rehetra amin’ny verana solomaso. Mamerina toy ny vaovao mihitsy aza ireto akora ireto ka mandaitra raha ampiasaina amin’ny verana solomaso kiaka.
Lamba sarotra pasohana… mampiasà vovon-katsaka
Misy ny karazana lamba izay tena sarotra pasohana. Mba hanamora izany ka hampitsotra haingana ny lamba dia azo ampiasaina ny vovon-katsaka. Araho ary ireto dingana ireto.
Marary kibo sy mivalana… andramo ny ranom-bary
Rehefa tratry ny areti-kibo sy ny fivalanana dia tena ilain’ny vatana ny rano. Ny ranom-bary dia isan’ny tena mandaitra amin’izany satria ankoatra ny maha rano azy dia mitondra ireo karazan’otrik’aina ilain’ny vatana ihany koa izy ity.
Manasitrana kohaka ny sôkôla…
Ahitana singa antsoina hoe : “théobromine”, izay manasitrana ny kohaka ao anatin’ny sôkôla. Ankoatra izay anefa dia manamandina ny tenda ihany koa ity zava-mamy iray ity ka mampitony ny kohaka. Raha sendra mikohaka ary ianao dia araho ireto.
Mitsabo hodi-potsy ny karaoty
Ny hodi-potsy dia afaka sitranina amin’ny akora natoraly. Tsy dia faheno loatra kanefa dia tena mandaitra amin’izany ny karaoty. Andramo ary ity fikarakarana ity.
Ny atao mba tsy hiraikitra amin’ny lapoaly ny trondro…
Rehefa tsy hay ny manendy trondro dia miraikitra amin’ny lapoaly ka potipotika tanteraka izy ireny.
Voankazo kely fa ahavitana zavatra maro ny voasarimakirana. Tsy tambo isaina ireo voka-tsoa entiny ho an’ny fahasalamana ary tsy ny vatana ihany no ahazo tombony fa hatramin’ny fanaka sy ny kojakoja rehetra ao an-tokantrano ihany koa.
1. Ny voasarimakirana no manala ireo tasy manamainty ny fanaka vita amin’ny « marbre ». Zaraina roa voasarimakirana ary rarahana sira. Iny no ikosehana an’ilay fanaka.
2. Manala mora foana ny tasy vokatry ny hatsembohana ny voasarimakirana. Ranom-boasarimakirana 200ml no arotsaka ao anatin’ny rano hanasana ny lamba. Alona 30 minitra ary kobanina avy eo. Raha manana masinina fanasan-damba dia araraka ao anaty masinina miaraka amin’ny vovo-tsavony fotsiny ny ranom-boasarimakirana.
3. Raha toa ka nisy arafesenina ny akanjo, vokatry ny bokotra na fehikibo, dia hosorana voasarimakirana nasiana sira eo amin’io faritra io. Avela hilona mandritra ny 30 minitra vao kobanina.
4. Raha nalazo ny salady novidiana satria tratran’ny masoandro dia aza ariana avy hatrany. Maka voasarimakirana iray, zaraina roa. Ny ranon’ilay silany iny no afangaro amin’ny rano andomana ilay salady ary apetraka ora iray ao anaty vata fampangatsiahana.
5. Raha efa voazara roa ny zavoka, na te hikarakara lasary amin’ny zavoka, dia rarahana ranom-boasarimakirana eo amboniny mba tsy hivadika ho mainty be ny lokony.
6. Fenoina ranom-boasarimakirana ny lamba iray dia ampandalovina eny amin’izay faritra fandehanan’ireo vitsika na biby kely hafa. Hampitsoaka azy ireo izany ary misoroka ny fiverenany eo.
7. Mba hamono ny bibikely mety hiraikitra amin’ny voankazo dia lomana rano efa nasiana ranom-boasarimakirana izy ireo vao hanina.
8. Raha mikorontana ny vavony na mitohana dia dité nasiana voasarimakirana no tsara sotroina handaminana azy.
9. Raha be tasy amin’ny tarehy dia araraka amin’ny lamba madio tsara na vovon-dandihazo ny ranom-boasarimakirana. Izany avy eo no ahosotra amin’ny tarehy, anadiovana azy.
10. Tapaka voasarimakirana iray dia efa ampy hisorohana ireo fofona ratsy vokatry ny hatsembohana, mivoaka amin’ny vatana. Rehefa avy misasa dia ahosotra amin’ny helika ilay voasarimakirana. Mbola azo ahosotra amin’ny hoditry ny tanana iny voasarimakirana iny, hahatanora azy ary hikikisana ny hoho ihany koa, hahafotsy botsika ary ireo sy hanamafy azy.